Intuit TurboTax wuxuu IRS ka dhigayaa mid Fiican | Martech Zone
Intuit TurboTax wuxuu IRS ka dhigayaa mid wanaagsan
Strike One… maanta waxay ahayd maalin cashuur. Xaqiiqdii ma aanan dooneynin inaan sameeyo canshuurteyda, laakiin waxaan rabaa inaan dhameystiro iyadoo waqti badan harsan yahay. Haysashada ganacsi waqti-dhiman ah (oo hadda lumiya lacag) waxay kadhigeysaa xafidaada diiwaanada mid gebi ahaanba lama huraan ah waana necbahay diiwaanada. Marka asal ahaan waxaan heystaa armaajo fayl ah oo aan ku riixo qoraalo, rasiidhada, iyo diiwaangelinta masaafada. Kadib, marka waqtiga cashuurtu yimaado, waxaan qodo dhammaan fayllada waxaanan si taxaddar leh u abaabulaa wax kasta oo dhaca haddii ay jirto xisaab-celin xagga jidka ah
Sannadkii 2005-tii waan ka tanaasulay ganacsiga dhinaca maxaa yeelay waxay ahayd dhibaato intaas la eg. Si kastaba ha noqotee, sanadkaan adeegyadayda ayaa ahaa kuwo aad u badan oo baahi badan leh exposure laakiin, si daacadnimo ah, ma ahan lacag badan. Taasi waa caadi… waa la xisaabiyay wayna shaqeyneysaa. Aad baan u xushay sidaa darteed shabaqadiisa ayaa ah in aan inbadan ku bixiyay meheraddayda intii aan keenay. Hadafkaygu badanaa waa in aan jebiyo xitaa, laakiin waxaan haystay koonto bum oo i hoos dhigaysa.
Sikastaba… Waxaan qorsheeyay dhamaadka usbuuca si aan u sameeyo canshuuraha inta caruurtu aadayaan booqashada Hooyadood. Sida nasiibku leeyahay, taasi waa la joojiyay sidoo kale. Laba ku dhufo.
Waxaan soo galay TurboTax si aan u soo dejiyo softiweerka oo waxaan moodayay inaan dhibaato ku jiro…. Boggeyga koontada waxaan horay u dalbaday Nooca TurboTax Home & Business 2006. Laakiin waxay u ahayd Windows oo hadda waxaan haystaa Mac. Saddex shaqo joojin?
Waxaan soo galay nooca webka ee softiweerka oo layaaban nooca app ee aan heli doono. Wiil, ma waxaan ku jiray dhacdo la yaab leh. Waxay ahayd gebi ahaanba la yaab leh. Isticmaalka barnaamijka softiweerka ayaa qummanaa… dhinaca bidix ee bidix ayaa la soo koobay dhinaca midigna waxaa laga helay caawimaad dheeri ah. Qeybta dhexe, dalabku wuxuu u shaqeeyay si bilaa cillad ah. Waxaan awooday inaan horay iyo gadaal usocdo, aan ka boodo qeybaha, dib u boodo… waligeyna arin kama aanan yeelan.
Markii ugu horreysay ee aan bilaabay, waxaan ku socday isbarbaryaacyo tan iyo markii aan moodayay inaan u baahdo inaan soo dejiyo barnaamijka. Ma jirin baahi. Qiyaastii kalabar intii aan gudanayay canshuurahayga, in kastoo, IE7 waxay go'aansatay inay qaado qashin (layaab malahan). Waxaan ka walwalsanahay in macluumaadka qaar iga luntay laakiin markii aan ku soo galayay isticmaalka Firefox, waligey igama badin garaacis. TurboTax ayaa badbaadinaysa sidaad u socoto.
Waxyaabo kale oo waaweyn oo waaweyn import Weli waan soo dhoofin karay canshuuraha 2005 si aan madax ugu bilaabo. Sidoo kale, waan awooday inaan ka soo dejiyo dhammaan xogtayda W-2 ADP barnaamijka 'TurboTax'. Waxaan ku xareystay si elektaroonig ah, si toos ah ayaan lacagta ugu soo celinayaa, waxaan helay digniino iimayl ah markii ay diyaar u ahaayeen in la ansixiyo, mid kalena waan heli doonaa markii lacagtayda la dhigo - qiyaastii 9 maalmood
Isku soo wada duuboo, Intuit ayaa maalintaydii samaysay. Codsi macno u samayn kara lambarkayaga cashuuraha ayaa ah mid aad u layaableh. Xitaa Madaxweyne Bush wuxuu leeyahay:
Nambarka cashuurtu waa qalalaase adag Waad xaqiiqsatay, waa milyan milyan oo bog.
Thanks, Intuit. Waxaan isticmaalayay TurboTax ilaa 8 sano hada waxaanan u maleynayaa Intuit inay lahaan karto macmiil noloshiisa oo dhan (ilaa iyo inta aysan ka takhalusin khubaradooda isticmaalkooda!) TurboTax ayaa IRS sifiican u eeg. Waxaan la yaabanahay haddii nidaamka canshuuraha weligiis uu hagaagi doono illaa inta ay leeyihiin karti intaas le'eg oo ay ku qaadan karaan qalalaase qalafsan oo ay ugu abaabulayaan codsi sidan u wanaagsan.
Dadkaas u maleynaya in barnaamijyada desktop-ka aysan ka dhaqaaqi karin internetka, kaliya ku samee canshuurahaaga TurboTax Khadka tooska ah. Niyad jabkeyga kaliya ee geeddi-socodka oo dhan wuxuu ahaa markii aan isla gartay in sannadkan aan sameeyay wax ka yar sidii sanadkii hore. Ugh. Iyo wiilkeyga noqday 17 jir sidaa darteed anigu hadda ka dib uma helayo sumcadda $ 1k canshuurta isaga.
Technorati Rank WordPress Plugin 1.0.9 Waa lasii daayay
Mar 5, 2007 at 7: 26 AM
Waxaan taageere u ahaa TurboTax (daabacaadda desktop) dhowr sano hadda sidoo kale. Sidee daabacaadda khadka tooska ah wax uga qabataa canshuur celin badan? Taasi waa, ma inaad ku bixisaa cashuur celin kasta?
Xusuusnow dhowr sano ka hor markii Intuit ay adeegsatay wax soo saar si ay u joojiso rakibaado badan oo hal CD ah? Waxay ku dhawaaqday warqad wanaagsan, laakiin waxay ka careysiisay dhammaan qoysaska (lamaanaha) filayay inay awoodaan inay canshuuraha ka qabtaan kombuyuutarradooda. Waxaan rajeyneynaa in nooca khadka tooska ah ee internetka uu yahay mid dabacsan.
Mar 5, 2007 at 8: 36 AM
Runta markaan kuu sheego ma hubo! Kaliya (mahadsanid) mid ayaan ka walwalsanahay. Uma maleynayo inaan dib ugu laaban doono desktop ka dib markaan isticmaalo internetka! Ma jiro wax rakibid ah, iyo xogteyda oo dhan ayaa laga heli karaa khadka tooska ah halkan wixii ka socda! (Waxaad awoodi kartaa inaad kaydiso dhammaan foomamkaaga canshuurta adigoo adeegsanaya PDF si aad rikoor u haysato).
Mar 5, 2007 at 6: 26 PM
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan akhriyo khibradaada wanaagsan ee aad lajirto TurboTax sanadkan. Waad ku mahadsantahay inaad tahay macmiil daacad ah! Waxaan la wadaagay qoraalkaaga qaar ka mid ah nashqadeeyaasheena sidoo kale maadaama aan hubo inay ku raaxeysan doonaan kudos.
Maamulaha Suuqgeynta, TurboTax
Mar 5, 2007 at 10: 16 PM
Waad ku mahadsantahay ka tagida qoraalka noocan ah waana ku faraxsanahay inaad wadaagtay!
Mar 7, 2007 at 9: 47 PM
Saaxiib, Waxaan isticmaali jiray TurboTax Online tan iyo ilaa 2001. Haddii aad isticmaasho sanadka soo socda, waxay ku soo jiidan doontaa xogta sannadkan koontada si aadan dib ugu noqon oo aad alaabtii dib u gasho. Waxay sidoo kale ku hayaan dhammaan soo-celintaadii hore ee khadka tooska ah. Ma isticmaali doono wax kale.